Marketing Trend ကိုမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနေသူဆိုသိထားသင့်တဲ့ Marketing နည်းလမ်း ၂ မျိုး -
Inbound Marketing ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရဲ့ Business ကိုတိုက်ရိုက် မကြော်ငြာပဲ Audience ကိုအရင်ဆုံး ရင်းနှီးမှုရှိအောင် ဆွဲခေါ်လာပြီး အလားအလာရှိတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ ကြော်ငြာခြင်း သဘောဖြစ်ပါတယ်။ Inbound Marketing ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ Visitor တွေကိုဆွဲဆောင်လာနိုင်ဖို့၊ Brand ချဲ့ထင်ဖို့ အတွက် Valuable Content တွေဖန်တီးပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းဗျူဟာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Valuable Content တွေက Inbound Marketing အတွက်အဓိကကျတဲ့ အချက်ဖြစ်ပြီး Audience ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုရင် Modern Technology တွေဖြစ်တဲ့ Internet, Mobile Phone နဲ့ Social Media တွေပေါ်မှာ မှီခိုပါတယ်။ Inbound Marketing ကိုတစ်နည်းအားဖြင့် Internet Marketing လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ Inbound Marketing အတွက် မေးစရာမေးခွန်းတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ Audience တွေလိုတဲ့ Product/Service တွေကို Audience Information မရှိပဲ ဘယ်လိုရောင်းမှာလဲ? ဒီအချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်. အခုလို Internet ခေတ်မှာ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ Product/Service တွေကို အပြင်ထွက် အချိန်ကုန်ခံပြီး လိုက်ရှာနေမယ့် လူတွေရှားသွားပါပြီ။ Search Engine Marketing, Social Media Marketing နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ Product/Service Information တွေကို Valuable Content တွေနဲ့ ဖန်တီးထားမယ်ဆိုရင် Audience တွေဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Product ပဲဖြစ်ဖြစ် Service ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာဖွေရတာ အလွန်လွယ်ကူစေပါတယ်။ Inbound Marketing မှာပါဝင်တဲ့ Marketing နည်းပညာတွေကတော့ SEO, SEM, Social Media Marketing အစရှိတဲ့ Internet Marketing တွေပါဝင်ပါတယ်။ နည်းပညာခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် Inbound Marketing ကအလွန်ကို အသုံးဝင်တဲ့ Marketing နည်းဗျူဟာ တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Sunday May 3rd, 2020/ Blog/0Comment